Maung Ba Kaung: February 2009
အေးအေးမာကတော့ ရှေ့မှာ ထိုင်လျက် ဘကောင်းဘက်လှည့်ပြီး ခဲတံ သို့မဟုတ် ပေတံ ငှားသလိုလိုနှင့် ဘကောင်းတွက်ပြီးသမျှ အဖြေများကို လှည့်ကာ လှည့်ကာ ကြည်လေ့ရှိသည်။ ပြီးတော့ ငှားထားသည့် ခဲတံ၊ ပေတံတို့ကို ပြန်ပေးဖို့ သတိမရတော့။ သူမ အကျင့်က အဲဒီလို။
အခုလည်း ဘကောင်းသင်္ချာတွက်ပြီးတော ပုံဆွဲဖို့ ခဲတံလိုက်ရှာတော့ ဘယ်မှ ရှာလို့ မရ။ ခုံအောက် ငုံ့ကြည့်သည်။ မတွေ့။
ငတော် ကို လှည့်ကာ မေးကြည့်ရသည်။
ငတော်ကတော့ ညာမပြောတတ်။ ဘကောင်း တစ်လောကလုံးကို တရားခံစစ် စစ်သလို လိုက်မေးရတော့မည်။ ခုံအောက်မှာ မရှိတာလည်း အသေအချာ။ နံဘေးက ခုံအောက်တွေပါ အကုန် ရှာကြည့် ပြီးပြီ။ ဘကောင်း စိတ် နည်းနည်း တိုလာသည်။ ဘယ်နဲ့ ဒီခဲတံက ဘယ်ကို ရောက်သွားရပြန်တာတုံး။
“လှိုင်ဘွား မင်း ငါ့ခဲတံ ယူထားသေးလား”
လှိုင်ဘွားသည် ခေါင်းသာ ရမ်းပြနိုင်တော့သည်။ သူ့တွင် အခုထိတိုင်း သင်္ချာပုစ္ဆာတွေက တွက်လို့ မပြီးနိုင်သေး။ ဘကောင်းတို့သူငယ်ချင်း အုပ်စုတွင် လှိုင်ဘွားသည် ဉာဏ်ထိုင်းအထိုင်းဆုံး။ ခေါင်းသာ ရမ်းပြနိုင်သော လှိုင်ဘွားက ရှေ့တွင် ထိုင်နေသော အေးအေးမာ နောက်ကျောကို တချက်လှမ်းကြည့်လျက် မေးတချက်ငေါ့ပြသည်။ သဘောကတော့ အေးအေးမာ ယူထားနိုင်သည်ပေါ့။
ရှေ့တွင် ထိုင်နေသော အေးအေးမာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တွေ့ပါပြီ။ အလဲ့ သူမက ဘကောင်း ခဲတံနှင့်ပင် သင်္ချာတွေ အသေအချာ တွက်နေသည်။ ဘကောင်း စိတ်က နဂိုကတည်းက မြန်ပါဘိနဲ့။ သူ့ခဲတံကို အေးအေးမာယူပြီး သုံးနေတာ မကြိုက်။ စိတ်တိုသွားသည်။
“အေးအေးမာ..ငါ့ခဲတံ ပြန်ပေး..အဲဒါ ငါ့ခဲတံ…နင်ငါ့ခဲတံ ခိုးထားတယ်”
နောက်ကနေ ဘကောင်းက လှမ်းပြောတော့ အေးအေးမာ ရုတ်တရက် ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်သွားသည်။ ပြီးတော့ သူ့ကို လည်း ခဲတံ ခိုးထားတယ်တဲ့။ အဆုံးအစမရှိ ဗြုန်းကနဲ လှမ်းပြောပြီး စွတ်စွတ်စွဲစွဲ။ အေးအေးမာကို ဒါမျိုး လာပြောလို့ကတော့ အခြားလူဆိုဘယ်ရမလဲ။ အေးအေးမာ နူတ်က တစ်ခါတည်း ပြန်ပက်ထဲ့လိုက်မှာ။ ဒါပေမယ့် ဘကောင်းကိုတော့ အေးအေးမာ ရှိန်သည်။ ရှိန်တာထက် ပိုပြီးတော့ ခင်တွယ်မှုကပိုများသည်။
“ရော့..နင့်ခဲတံဆို ပြန်ယူ. ငါ့ ခုံအောက်က ကောက်တွေ့တာ။ နင့်ခဲတံမှန်း မသိလို့”
အေးအေးမာ နောက်လှည့်ပြီး ဘကောင်းကို ခဲတံပြန်ပေးသည်။ သို့သော် ဒီလို အလွယ်တကူနှင့် ဘကောင်း မကျေနပ်နိုင်။
“နင် ခိုးထားတာပါ…သူခိုး..နင် သူခိုး”
ကျူရှင် မလာခင် ကတည်းက မကျေမနပ်ဖြစ်နေသော ဘကောင်း။ အခု အကွက်တွေ့သည်နှင့် အေးအေးမာကို ပြန်ပြီး ကလဲစား ချေတော့သည်။
အေးအေးမာ ဘာမှ ဆက်မပြောတော့။ ရှေ့ပြန်လှည့်သွားပြီး ခေါင်းငုံ့ကာ အခြားခံတံ တစ်ချောင်းဖြင့် သင်္ချာဆက်တွက်နေသည်။ ဒါပေသည့် ဘကောင်း၏ စကားသံက ရပ်မသွား။
နောက်တွင် ထိုင်လျက် တိုးတိုး တိုးတိုးနှင့် ကဗျာရွတ်သလို့ မပြတ်တမ်း ရွတ်နေတော့သည်။
“သူခိုး.. ဓါးမြ..သူခိုး.. ဓါးမြ…သူခိုး…ဓါးမြ….”
အေးအေးမာကို သူခိုးဟု စွတ်စွဲရတာ အားမရတော ဓါးပြဟုပါ ထည့်ပြီး စွတ်စွဲတော့သည်။
ငတော်သည် ပြဿနာထဲ ဝင်မပါရဲ။ ဘေးတွင် အသာအယာကုတ်လျက် ဘကောင်း၏ သီးချင်းညည်းသလို ယိုးစွတ်သံကို နားထောင်နေသည်။ လှိုင်ဘွားကတော့ တချက် ခေါင်းထောင်ကြည့်သည်။ ပြီးတော့ ခေါင်းတစ်ချက် ကုတ်ကာ သင်္ချာဆက်တွက်နေသည်။ သူကပဲ ဘကောင်းရဲ့ ခဲတံကို အေးအေးမားထံလှမ်းကြည့်ဖို့ မေးငေါ့ပြခဲ့တာ မဟုတ်လော။ အခု ခဲတံပြန်တွေ့တော့ သူ့တာဝန် ပြီးပြီ။ ကျန်တာ သူနဲ့ မဆိုင်တော့။သင်္ချာပြီးအောင် တွက်ဖို့ အရေးကြီးသည်။
အေးအေးမာ ငိုလေပြီ။ ရှည်ရှည် သွယ်သွယ် သူမပခုံးပြင်ကလေးသည် တသိမ့်သိမ့် လှုပ်ကာလှုက်ကာ တုန်ခါနေတော့မှ အေးအေးမာတစ်ယောက် ငိုနေမှန်း ဘကောင်း သိတော့သည်။ အိ ကနဲ ရှိုက်သံက တိုးတိတ် ညင်သာစွာ တစ်ချက်တစ်ချက် ထွက်လာသည်။ မျက်ရည်ပေါက်သေးသေးသွယ်သွယ်တို့က ဖြူဖြူဖွေးဖွေးစာရွက်တို့ အပေါ် အသာအယာ စီးဆင်းကျနေသည်။ အေးအေးမာက ငိုတာတောင် အသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင်နှင့် ဗြဲကနဲ မငို။ မိန်းကလေး ပီသစွာ အသာအယာငိုသည်။ လက်ဖမိုး ညိုညိုဖြင့် မျက်ရည်စတို့ကို သုတ်သည်။
အေးအေးမာရဲ့ငိုသံကြားတော့မှ ဘကောင်းအသံတိတ်သွားသည်။ သို့သော် စူစူပုတ်ပုတ်နှင့် မကျေမနပ်ဖြစ်နေသော ဘကောင်းမျက်နှာကတော့ ပြော့ပြောင်းမသွားသေး။ အေးအေးမာ ငိုတော့ ထို ခဲတံဇာတ်လမ်းက ထိုမှာတင် အဆုံးမသတ်သွား။
ကြီးကြီးရဲ့ အသံက ဘကောင်းတို့ ထိုင်နေသည့် ခုံနောက်မှ စူးစူးရှရှ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ကြီးကြီးရဲ့ မေးခွန်းကြောင့် ကျူရှင်ခန်းထဲတွင် ထိုင်နေသာ ကျောင်းသူကျောင်းသား အားလုံး ၏ မျက်လုံးက အေးအေးမာဆီ စုပြုံရောက်သွားကြသည်။ တစ်ခန်းလုံး တိတ်ဆိတ်သွားလျက် ကြီးကြီးကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး အလိုက်တသိ ကိုယ်စီ ခေါင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပုဝင်ထားကြသည်။ မကြောက်ကြပဲ နေမလား။ ကြီးကြီးလက် ထဲမှာ ရိုက်ဖို့ ကြိမ်လုံးက အဆင်သင့် ကိုင်ထားတာကိုး။ ပြီးတော့ ကြီးကြီးပုံစံက အေးအေးမာ ငိုနေသည့် ကိစ္စကို အသေအချာဖြေရှင်းတော့မည့်ပုံ။
“အေးအေးမာ..ဘာလို့ ငိုနေတာလဲ..ကြီးကြီးမေးတာ ဖြေလေ”
ကြီးကြီးထံမှ ဒုတိယအကြိမ် မေးခွန်းထွက်လာတော့ ရှိုက်ငိုနေသော အေးအေးမာ အသံတိတ်သွားသည်။ မျက်ရည်စတို့ဖြင့် ဝင်းလက် စိုစွတ်နေသော မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်စက်စက်တို့သည် ကြီးကြီးကို အားကိုးတကြီးကြည့်လိုက်သည်။
“ဘကောင်းက သမီးကို သူခိုးလို့ ခေါ်လို့”
မျက်ရည်တို့ စိုရွှဲနေသော သူမ၏ နူတ်ခမ်းတို့သည် ငိုရှိုက်သံတို့ဖြင့် မဲ့ကာရွဲ့ကာ တွန့်လိမ်လျက် ကြီးကြီးကို တိုင်းတန်းတော့သည်။
သည်တော့မှ ကြီးကြီးမျက်လုံးက ဘကောင်းဆီရောက်သွားသည်။ ခေါင်းငုံ့ကာ သင်္ချာစာအုပ်ကို ရည်ရွယ်ချက်မရှိ ဟိုလှန်ဒီလှန်ဖြင့် ကိုယ့်အပြစ်ကို ကိုယ်သိသော ဘကောင်းက ကြီးကြီး မျက်နှာကို မကြည့်ရဲ။ ဤသည်ကိုက ဘကောင်း သူ့အပြစ်ကို ဝန်ခံပြီးဖြစ်သည်။
လေသံနည်းနည်းမာလာသော ကြီးကြီး ခေါ်သံကြောင့် ဘကောင်း ခေါင်းမော့လာသည်။ မျက်လုံး ပေကလပ် ပေကလပ် မျက်နှာ ငယ်ငယ်ဖြင့် ဘကောင်းမျက်နှာက အသနားခံသည့်ပုံ။ သို့မဟုတ် အယူခံဝင်မည့်ပုံ။
သို့သော် ကြီးကြီး၏ မျက်နှာထားက တင်းတင်းနှင့် စီရင်ချက် ချမည့် တရားသူကြီး၏ အသွင်။
“ဘကောင်း….အေးအေးမာကို ဘာလို့ သူခိုးလို့ ခေါ်တာတုံး”
“သူက ကျွန်တော့် ခဲတံကို ခိုးထားလို့”
“သမီး မခိုးထားဘူး ကြီးကြီး. ခုံအောက်က ကောက်တွေ့ထားတာ..အဲဒါ…သူက သမီးကို သူခိုး ဓါးမြ လို့ ခေါ်နေတာ”
ကြီးကြီးရှေ့မှာ အေးအေးမာက မခံ။ ကြီးကြီးရှေ့တွင် ဒီလို ယိုးစွတ်တာကိုတော့ ခေါင်းငုံ့မခံတော့။
စမြိတ်ခုံ ရွာသူတို့သည် ငရုတ်သီးကြော်တွေ စားပြီး နုတ်သီးကောင်း လျှာကောင်း ကက်ကက်လန်တွေချည်လား မသိ။ ဘကောင်းတစ်ယောက် ထိုကဲ့သို့ စမြိတ်ခုံ ရွာသူနှင့် အပြိုင် ကြီးကြီးရှေ့တွင် ဖြေရှင်းချက်တွေ ထုတ်မနေချင်။ နဂိုကတည်းကမှ ဘကောင်း၏ ဆန္ဒက အေးအေးမာအပေါ် အနိုင်ရဖို့ပင်။ အေးအေးမာငိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဘကောင်း အေးအေးမာ ပေါ် အနိုင်ရခဲ့ပြီဟု ထင်သည်။ သို့သော် ကြီးကြီးတစ်ယောက် စာသင်ခန်းထဲတွင် ရှိနေသည်ကို ဘကောင်း သတိမရ။
“သူက မခိုးထားတာကို နင်က ဘာလို့ သူများကို သူခိုး ဓါးမြလို့ ခေါ်ပြီး ရိုင်းပြရတာတုံး..လက်ဖဝါးဖြန့်စမ်း”
ကြီးကြီး၏ ကြိမ်တော်က ဘကောင်း၏ လက်ဖဝါးပေါ် တဖြန်းဖြန်းနှင့် ကျလာသည်။ ထိုကြိမ်သံနှင့် အတူ ဘကောင်း၏ မျက်နှာမှ မျက်ရည် မျက်ပေါက်တို့ ပြိုးပြိုးပြိုက်ပြိုက် အပြိုင် ကျဆင်းလာသည်။ ထို့အပြင် တစ်ခန်းလုံး ကြားလောက်အောင် တစ်ဗြဲဗြဲ နှင့် ဘကောင်း၏ ငိုသံကလည်း အေးအေးမာ၏ ငိုသံကို တိတ်စေသည်။ ဗုံလုံးတစ်လှည့် ငါးပျံတစ်လှည့် ပင်။ ဘကောင်း အေးအေးမာကို ငိုအောင် လုပ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ ဘကောင်းအလှည့်ပေါ့။ အေးအေးမာ ငိုတုန်းက တိုးတိုးတိတ်တိတ်နှင့် ညင်ညင်သာသာ ရှိသလောက် ဘကောင်းငိုတော့ တစ်ခန်းလုံးကြားစေလျက် အုန်းဆံနေအောင် ငိုသည်။
ဘကောင်း ငိုတော့ အေးအေးမာ လည်း စိတ်မကောင်း။ ညိုးငယ်သော မျက်နှာကလေးဖြင့်သာ ဘကောင်းကို လှည့်ကြည့် နိုင်သည်။ တစ်ခန်းလုံးကလည်း တိတ်ဆိတ်စွာပင် ဘကောင်းကို အသာအယာ ဝိုင်းကြည့်ကြသည်။ ငတော်နှင့် လှိုင်ဘွားတိုလည်း ငြိမ်ကုတ်နေကြသည်။ စကားတစ်ခွန်းမျှ ဟဟ မဆိုရဲ။ ဘကောင်း၏ ဘေးတစ်ချက်တွင် ခေါင်းငုံ့ကာ သင်္ချာစာအုပ်ထဲတွင် အာရုံစိုက်လျက် သင်္ချာတွက်နေသယောက် ဟန်ကိုယ့်ဖို့ကြသည်။
ဘကောင်းတစ်ယောက် တစ်ကယ်တန်း ငိုရှိုက်ရပြီးဆိုတော့ ပါးစပ်ကလေး ဟလျက် အသက်ဝအောင် ရှုရသည်။ မျက်ရည် မျက်ပေါက်တို့ကို လက်ဖမိုးဖြင့် သိမ်းနိုင်သလောက်သိမ်းကာ လက်ချောင်းတွေ အကြားမှ ဘယ်သူတွေ သူ့ကို ဝိုင်းကြည့် နေသလဲဟု အကဲခတ်ရသေးသည်။ အလိုလေး.. တစ်ခန်းလုံး ဝိုင်းကြည့် နေကြပါလား.။ အတန်းသူ အတန်းသားတွေ ရှေ့တွင် ငိုရတော့ အလွန် ရှက်သည်။ သို့သော် ကြီးကြီး ရိုက်တော့လည်း ဝမ်းနည်းစိတ်ဖြင့် ငိုရသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်သား ပမာ အားလုံးရှေ့တွင် ရှက်ရွံမိသည်။ စာပွဲပေါ်တွင် တင်ထားသော ခဲတံကလည်း ဘကောင်းကို လှောင်ပြောင် နေသလို့ပင်။ ယုတ်စွအဆုံး ထို အသက်မဲ့သည် ခဲတံကလေး တစ်ချောင်းကိုပင် ဘကောင်း မကြည့်ရဲ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် တစ်ကိုယ်လုံး မြေလျှိုးပြီး နေလိုက်ချင်သည်။ ထိုခဲတံ ပင် မကတော့ ဘကောင်း၏ ပုံဆွဲစာအုပ်ထဲမှ ဓါးကိုင် သူရဲကောင်းတို့ကပင် ဘကောင်းကို ရှုတ်ချနေသည်ဟု ထင်သည်။ အရာရာသည် မလှပတော့။ မငိုအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြီးစားပြီး ထိန်းသည်။ သို့သော် ဝမ်းနည်းသည့် စိတ်အာရုံကို ကျော်လွန် အနိုင်ရအောင် မလုပ်နိုင်။ ရှိုက်သံတို့သည်သာ အဆက်မပြတ်ထွက်နေသည်။ ငိုရှိုက်ရသဖြင့် အသက်ရှုမဝဖြစ်ကာ ပါးစပ်ဟလျက် ကြိုးစားပြီး အသက်မှန်အောင် ရှုသည်။ ဘကောင်း၏ ငယ်ရွယ် နုနယ်သည့် နှလုံးသားတွင် ဆူးတောင်လေး တစ်ချောင်း မသိလိုက် မသိဘာသာ စိုက်ဝင်သွားသည်။ ငိုရှိုက်သံတို့ဖြင့် အသက်ပြင်းပြင်း တစ်ချက်ရှုသွင်းလိုက်တိုင်း ဆူးတောင်လေးသည် နှလုံးသားထဲတွင် ပိုမိုနစ်ဝင်သွားတော့သည်။
ကြီးကြီးသည် အပြစ်ရှိသည့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတို့၏ လက်ဖဝါးကို ကြိမ်ဖြင့် ရိုက်ကာ ဆုံးမသည်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်အပေါ် ရင့်သီး ရိုင်းပြသော စကားလုံးတို့ဖြင့် ရိုင်းစိုင်းခဲ့သော ဘကောင်း၏ ငယ်စဉ်တုန်းက အပြစ်တို့အား ကြီးကြီးက ရိုက်နှက်ကာ ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ထိုစဉ်တုန်းက ဆူးတောင်ကလေးတစ်ချောင်း ဘကောင်း၏ နှလုံးသားထဲတွင် ထိုးထွင်း ပေါက်ရောက်ခဲ့သည်ကို ကြီးကြီးမသိခဲ့ချေ။ အေးအေးမာလည်း မသိ။ ငတော် နှင့် လှိုက်ဘွားတို့လည်း မသိခဲ့ကြချေ။
အသိတရား၊ ဉာဏ်ပညာ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်မှု၊ တာဝန်ယူနိုင်စွမ်းသော သတ္တိခွန်အားတို့သည် အချိန်အခါ တို့ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့် အမျှ ရင့်သန် ခိုင်မြဲလာသော သဘောတရားရှိကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာတို့ကို လက်ရှိပစ္စုပ္ပန် ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းတို့ဖြင့် ပြန်ပြောင်း လေ့လာသုံးသပ်မိလျှင် ချို့ယွင်းချက်၊ ဟာကွက်၊ အမှားပေါင်း မြောက်မြားစွာတို့ကို တွေ့ရတတ်လေ့ရှိသည်။ ဤသည်ကား လူတို့ ဖြစ်တည်မှု ၏ တစ်စိတ် တစ်ဒေသပင်။ ၄င်းတို့ကို မသိလိုက် မသိဘာသာ အလိုက်သင့် စီးမျှော သွားစေလျက် ဘဝ စက်ယန္တရား ကို ပုံမှန် မောင်းနှင် သွားတတ်ကြသူများ ရှိသည်။ သို့သော် ညဉ့်နက်သန်းခေါင် အိပ်မက်မှ ရောင်ရမ်း နိုးထကာ လရောင်ကို မျှော်ကြည့်သူ တစ်ယောက်အတွက် ငယ်စဉ်တုန်းက ပြောခဲ့မိသော ရိုင်းပြသည့် စကားတစ်ခွန်းအပေါ် မှီတွယ် စွဲလန်းနေဆဲပင်။ ပြောခဲ့မိသော စကားတို့အပေါ် ရှက်ရွံနေဆဲ။
ထို ထုံးကုံးသူမ အခု ဘယ်များ ရောက်နေသည် မသိချေ။ အိမ်ထောင်တွေကျကာ သားသမီးတွေ တစ်စုနှင့် မိန်းမကြီး ပုံစံများ ဖြစ်နေလိမ့်မလား။ သို့တည်းမဟုတ် ပညာတတ် သူမကြီးဖြစ်ကာ နိုင်ငံတစ်ကာတွင် အများသူငှာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းကာ မော်မော်ကျော့ကျော့ ဖြစ်နေမလား။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာ သူ့တွင် သူမအား ပြောပြစရာ စကားရှိခဲ့သည်။
အကယ်၍သာ ဤညဉ့်နက်သန်းခေါင် လေဆိုင်တို့ ခရီးတစ်ခေါက် ကြုံဆုံလို့ ချမ်းသာရ ဘုရား တောင်ဖက်မုတ် လှည်းဘီးကြီးနှင့် အိမ်ရှေ့သို့ ရောက်ခဲ့လျှင် သူမကို ပြောပြပေးပါ။ သူ၏ တောင်းပန်စကားအား တိုးတိုးညင်သာ လေဆိုင်တို့နှင့် စကားပါးလိုက်ကြောင်းပေါ့။
ညသည် တိတ်ဆိတ်နေဆဲ။ သူ အိပ်ရာပေါ်သို့ ပြန်လှဲချလိုက်သည်။ ညကလည်း အေးချမ်းလိုက်တာကွယ်။ ဘာသံမှ မကြားရတော့ဘူး။ မျက်ခွံကို အသာအယာ ညင်သာစွာ ပိတ်လိုက်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အိပ်စက်ခြင်းက လွှမ်းခြုံလို့လာသည်။ သူ့နှလုံးသားလည်း အတော်အတန် ပေါ့ပါးသွားသည်။
ညနေ သုံးနာရီ ထိုးလျှင် ဒေါ်မမကြီး၏ ကျူရှင်တက်ရအုံးမည်။ စည်းကမ်းကြီးသော ဆရာမကြီး၏ ကျူရှင်ကိုတော့ မတက်ပဲ မနေရဲ။ အခြေခံပညာ သုံးတန်း တက်နေသော ဘကောင်း၊လှိုင်ဘွားနှင့် ငတော်တို့ သုံးယောက် ကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်း အငြိမ်းစားကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်မမကြီးထံ ၌ ဂဏန်းသင်္ချာကို လေ့လာရသည်။ ငတော် အခုချိန်ထိ ပေါ်မလာရင်တော့ ဘကောင်းတို့ ပုရစ်လိုက်နိုက်ဖို့ အချိန်မရှိတော့။ ကျူရှင်ပဲ သွားတက်ရတော့မည်။
ထိုနေ့က ချမ်းသာရ ဘုရားထဲ လှည့်လည်ကာ ပုရစ်နိုက်ကြရန်ဖြစ်သည်။ နိုက်လို့ရသည့် ပုရစ်များသည် ဘကောင်းတို့အတွက် အောင်ပွဲရ ဆုလဒ်များ ဖြစ်သည်။ တွင်းအောင်း သတ္တဝါအများအပြားရှိသည့်အထဲက ပုရစ်တွင်းကို ခွဲခြားရှာကြသည်။ မြေပုံ စုစုမို့မို့လေးများကို မျက်စိလျင်လျင် ဖြင့် ရှာရသည်။ မြေခွေးတွင်း နှင့် ပုရစ်တွင်းသည် ခပ်ဆင်ဆင်လေးရှိသည်။ မြေစာပုံ၏ ပုံသဏ္ဍန်၊ အရွယ်အစား၊ မြေစာ အကျစ်အပွကို ကြည့်လျက် ပုရစ်တွင်းကို ခွဲခြားသိသည်။ ရလာသည့် ပုရစ်များကို ပုရစ်တိုက်ကြသည်။ ပလတ်စတစ်အိပ်ထဲတွင် ထည့်ကာ ပုရစ်ဆိုသည့် သတ္တဝါကို သတ္တဗေဒပညာရှင်တစ်ယောက်အလား ဖင်ပြန် ခေါင်းပြန် အခေါက်ခေါက် အခါခါ ကြည့်ကြသည်။
ထို ချမ်းသာရဘုရား အနောက်ဖက်စောင်းတန်းသည် ဘကောင်းတို့ သူငယ်ချင်းအုပ်စု အချိန်းအချက်ပြုသည့် စုရပ်လည်းဖြစ်သည်။ အနောက်ဖက် စောင်းတန်းမှ ဆင်းလိုက်လျှင် အဆုံး၌ သင်္ဂါဇာချောင်းက ဗေဒါတွေ အပြည့် ဖွေးဖွေးလှုပ်မျှရှိသည်။ ခရမ်းရောင် ဗေဒါပန်းပွင့်တို့သည် အချိန်အခါ မရွေး ဟိုတစ်ဆုပ်၊ ဒီတစ်ဆုပ် ပွင့်အာကြသည်။ ရေဘုတ်ငှက်တို့သည်လည်း ဗေဒါတွေ အကြား ခိုအောင်းလျက်ရှိကြသည်။ ဗေဒါပင်တို့ သေဆုံးသောအခါ ရွှံညွှန်ဖြစ်သွားကြပြီး ချောင်းမြေအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ထိုဗေဒါချောင်း၌ပင် အိမ်ဝက်တို့ ရွှံလူးကြသလို ချောင်းနံဘေးတစ်လျှောက်ရှိ လူနေအိမ်တို့မှလည်း ရှိသမျှ အညစ်အကြးကို ဗေဒါချောင်းထဲသို့ စွန့်ပစ်ကြသည်။
ပုရစ်နှိုက်ဖို့ အချိန်မရှိတော့လျှင် သင်္ဂါဇာချောင်းပေါ် လေတံခွန်(စွန်)လိုက်ရအောင်လည်း စွန်လွှတ်သူများလည်း မရှိသေးချေ။ ထိုဗေဒါချောင်းသည် ဗေဒါတွေ ထူထူထည်ထည် ရှိလို့ပင် ဘကောင်းတို့ စွန်လိုက်သည့် အခါ ချောင်းအပေါ် ဗေဒါတွေဖိကာဖိကာ ဟိုဖက်ကမ်း ဒီဖက်ကမ်း ဖြတ်ကူးကြသည်။ သင်္ဂါဇာချောင်း တံတားပေါ်တွင် စွန်လွှတ်၊ စွန်ဖြတ်သူများ ရှိသည့် အခါ ဘကောင်းတို့ က စွန်လိုက်ကြသည်ပင်။ ထို ချောင်း၏ ဗေဒါတွေအပေါ် စွန့်စွန့်စားစား နင်းဖြတ်ကာ လိုက်လို့ရသည့် စွန်တို့သည်လည်း အောင်ပွဲရ အထိမ်းအမှတ် တစ်ခုပင်။ စွန်လိုက်သည့် အချိန်များဆိုလျင် အခြားသူများ စွန်ဖြတ်နေသည်ကို မော့တော့ မော့တော့နှင့် ဘကောင်းတို့ သူငယ်ချင်း တစ်သိုက် ထိုသင်္ဂါဇာချောင်း တံတားပေါ် ခြေချင်းလိမ်အောင် ရောက်ရက်ခတ်ရှိကြသည်။ စွန်လိုက်သည့် အချိန် တံတားပေါ်မှာ ဗိုက်နာလို့ကတော့ အိမ်ပြန်ပြီး နောက်ဖေးသွားသည့် ထုံစံမရှိ။ တံတားတိုင်ဖက်လျက် ကိစ္စကို ဖြေရှင်းကြသည်။ ချောင်းထဲက ငါးတွေ စားပေရော့ဟယ်။ တံတားပေါ်မှာတော့ လူတွေက ဖြတ်သွား ဖြတ်လာ။ စွန်ဖြတ်တာ ကြည့်ဖို့ကတော့ အလွတ်ခံလို့ မဖြစ်။ အဲဒီလောက် အထိ ဘကောင်းတို့ ကစားမက်တာ။
ပုရစ်နိုက် ထွက်ရန် ဘကောင်းတို့ သူငယ်ချင်း အုပ်စု ဘုရား အနောက်ဖက် စောင်းတန်းတွင် တွေ့ရန် အသေအချာ ပြောထားရက်သားနှင့် ငတော် ရောက်မလာသေးချေ။
“သွားကြမယ်ကွာ… ဒီကောင် သူ့ဘာသာသူ လိုက်လာလိမ့်မယ်”
ဘကောင်းကတော့ ငတော်တို့ အိမ်အထိလိုက်သွားပြီး ငတော်ကို ခေါ်လိုသည်။ အဖေါ်များလေ ပိုကောင်လေ။ ပြီးတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်တည်းသွားလျင် ဘုရားထဲ၌ နတ်ဖွက်ခံရမှာ ကြောက်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ဒေါ်မမကြီး၏ ကျုရှင်ကိုလည်း သွားရအုံးမည်ဟု စိတ်ကချီတုံချတုံ ဖြစ်နေသည်။
“ငါတို့ ဘုရားထဲမှာ လူစုခွဲပြီး သွားရင် နတ်ဖွက်ခံရလိမ့်မယ်..ဒီကောင့်အိမ် သွားခေါ်ရအောင်ကွာ..ပြီးတော့ ကျုရှင်လည်း တက်ရအုံးမယ်”
ဘုရားထဲတွင် နတ်ဖွက်ခံရမည်ဆိုသော ဘကောင်းစကားကြောင့် လှိုင်ဘွား ကြောစိမ့်သွားသည်။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည်။ ဒီရက်ပိုင်း ချမ်းသာရ ထုံးကုံး ရပ်ကွက်ဘုရားပွဲက နီးလာပြီဆိုတော့ ဘုရားထဲက နတ်တွေ အပျော်ကျူးပြီး ကလေးတွေကို ဖွက်တန်း ကစားတတ်လေ့ရှိသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဘုရားပွဲတုန်းကလည်း အခြားရပ်ကွက်က ကောင်လေးတစ်ယောက်တောက် ဘုရားထဲမှာ နတ်ဖွက်ခံရသည်ဟု ကျောင်းတွင် ကျောင်းသားအချင်းချင်း တစ်ယောက်စကား တစ်ယောက်နားဖြင့် တီးတိုး ပြောနေကြသည်။
ချမ်းသာရဘုရားပွဲ အကြောင်းကို လှိုင်ဘွားစဉ်းစားမိတော့မှ ငတော်တို့ အိမ်တွင်လည်း ဘုရားပွဲအတွင်း လူစည်နေပြီလား မသိချေ။ ငတော် အဖေက အရက်သမား။ အိမ်တွင် အရက်လည်းရောင်းသည်။ အခုလို ဘုရားပွဲရက်တွေဆို သူရို့အိမ်တွင် အရက်ပိုပြီး ရောင်းကောင်းသည်။ ငတော်က အရက်ကူရောင်းရသည်။ ငတော် အမေက ခဝါလည်း လုပ်သည်။ငတော် အမေက ငတော်ကို ပညာတတ် ဖြစ်စေချင်သည်။ သို့သော် သူရို့၏ ဘဝအခြေအနေက အခြားသူများထက် ပိုမိုပြီး ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရသည်။ စိတ်ကူး ရည်မှန်ချက်တို့အတွက် စဉ်းစာရမည့် အချိန် သူရို့တွင် များများစားစား မရှိ။
လှိုင်ဘွားနှင့် ဘကောင်းတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ လူကြီးတွေမသိအောင် ကိုယ်စီအိမ်က မရမကခိုးထွက်ခဲ့ကြသည်။
“ဘကောင်း…မင်းတို့အိမ်က ဘုရားပွဲ ဘာကျွေးမှာတုန်း”
ငတော်ကိုစောင့်ရန် စိတ်မရှည်ဖြစ်နေသော လှိုင်ဘွား၏ အာရုံက အစားအစာ အကြောင်းရောက်သွားသည်။ ချမ်းသာရဘုရားပွဲရက်များ စတင်ပြီဆိုလျှင် ထုံကုံးရပ်ကွက်ထဲရှိ အိမ်တိုင်းမှ စားစရာများ ကျွေးကြလေ့ ရှိသည်။
“ဒီနှစ်လည်း ငပိကြော်နဲ့ ဇီးပူသီးပဲလေ..”
“အေးကွ..ငတို့ အိမ်လည်း ငပိကြော်နဲ့ ဇီးပူသီးပဲ ကျွေးမှာတဲ့”
ဇီးဖြူသီးကို ဇီးပူသီးဟု ပဲခေါ်လေ့ရှိသည်က ထုံးကုံးသားတို့ ထုံးစံလေလာ၊ ကလေးဘဝက အသံထွက် မမှန်လို့ပဲလား မသိချေ။
ထုံးကုံးရပ်ကွက်ရှိ အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းကတော့ ဘုရားပွဲရက်အတွင်း အိမ်အလည်လာသည့် ဧည့်သည်တိုင်းအား ငပိကြော် နှင့် ဇီးဖြူသီး ကျွေးလေ့ရှိသည်။ ပိုက်ဆံ တတ်နိုင်သည့် အိမ်ကတော့ ဆနွင်းမကင်း၊ ကြာဇံဟင်း များဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံကြသည်ပေါ့။
ဘကောင်းစကား အဆုံးတွင် အဝေးဆီမှ လာနေသော ငတော်ကို လှမ်းတွေ့လိုက်သည်။
အသားညိုညိုညစ်ညစ်နှင့် ငတော်သည် ခေါင်းတွင် အုန်းဆီစိုရွှဲအောင်လိမ်းထားသည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်ပေသည့် ကျောင်းစိမ်းဘောင်းဘီအတိုကို ဝတ်ထားတုံး။ ဗျင်ကြမ်း အင်္ကျီက လက်တိုနှင့်။ ငတော်နှင့် စာလျင် ဘကောင်နှင့် လှိုင်ဘွားတို့နှစ်ယောက်က နိုင်ငံခြားဖြစ် လေဘေး အင်္ကျီ၊ဂျင်ဘောင်းဘီတို ကိုယ်စီနှင့် ခပ်မိုက်မိုက်။ ငတော်ကို မြင်လိုက်ရတော့မှ ဘကောင်းနှင့် လှိုင်ဘွားတို့ စိတ်အားတက်ကြွသွားသည်။ အဖေါ်စုံလျှင် ကမ္ဘာကိုတောင် တစ်ပါတ် ပါတ်လိုက်ကြအုံးမည်။ သို့သော် စိတ်အားတက်ကြွသည်က ကြာရှည်မခံ။ ငတော်သည် တစ်ယောက်တည်းလာတာမဟုတ်။ သူ့နောက်တွင် ကောင်းမလေး တစ်ယောက် လွယ်အိပ်ကလေးလွယ်ပြီး လိုက်လာသည်။ အခြားသူမဟုတ် အေးအေးမာ။ ပုံစံက ခပ်စွစွာနှင့် နှုတ်ခမ်းပဲ့၊ ပါးပဲ့အောင် ကက်ကက်လန် ရန်တွေ့တတ့်မည်ပုံ။
မနေ့က ပဲ အေးအေးမာ အမေကိုယ်တိုင် ဘကောင်းတို့ ကျူရှင်တက်နေသော ဒေါ်မမကြီးထံ အေးအေးမာကို လာအပ်သွားသည်။ ဘကောင်း အမေနှင့် အေးအေးမာတို့ အမေ ခင်မင်ရင်းစွဲရှိကြသည့် အတိုင်း စကားစပ်ကြရင်း ဘကောင်းတက်နေသည့် ဒေါ်မမကြီး၏ ကျူရှင်ကို အေးအေးမာအား ထားဖြစ်သွားကြသည်။
အေးအေးမာတို့ အိမ်က ချမ်းသာရဘုရား တောင်ဘက်မုတ်တွင် ရှိသည်။ သူမတို့ အိမ်ရှေ့တွင် မြင်းလှည်းဘီးလုံးကြီးကို အမြဲတန်း ထောင်းထားလျက်ရှိသောကြောင့် လှည်းဘီးကြီးနှင့် အိမ်ဟု အလွယ်တကူခေါ်ကြသည်။ မြင်းလှည်းဘီးလုံးကြီးက ရှိမှာပေါ့။ အေးအေးမာတို့ အဖေက မြင်းလှည်းမောင်းတာကိုး။ ဘကောင်းတို့ အိမ်က သူမတို့ အိမ်နှင့် မျက်စောင်းထိုး ဓါးလွယ်ခုတ်တွင် ရှိသောကြောင့် ဘကောင်း အမေနှင့် အေးအေးမားတို့အမေ ဟိုအိမ် ဒီအိမ် ကူးသန်းကူးလာ ရှိကြသည်။ ဘကောင်းအမေက ကျောက်ဆယ် ကုန်းရွာ အဆက်။ အေးအေးမာတို့ အမေက စမြိတ်ခုံရွာ အဆက်။ သို့သော် ထိုရွာသူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အလွမ်းသင့်သည်။ ဘကောင်းအမေချက်သည့် ကျောက်ဆယ်ကုန်းရွာ နွားနို့ခဲ ငပိချက် နှင့် အေးအေးမာ အမေကြော်သည့် စမြိတ်ခုံ ငရုတ်သီးကြော်တို့ အလဲအလှယ် စားကြသည်။ နောက်တွင် သူရို့ သားသမီးတွေကိုပါ အလှဲအလှယ် လုပ်ကြအုံးမည်လား မသိ။ အဲဒီလောက် အထိ ခင်ကြတာ။
အေးအေးမာက လူကသာ မူလတန်း သုံးတန်းကျောင်းသူ။ ဆံပင်ရှည်ရှည်နှင့် အပျိုကြီး စတိုင် ပုံစံဖမ်းထားသည်။ စကားပြောလျင်လည်း သူမနောက်က ကျားလိုက်နေသည့်အလား ဖလွတ် ဖလွတ်နှင့် အမြန်ပြောသည်။ အသားအရေက ညိုညိုညက်ညက်။ အညာသူမှန်း သိသာစေလှသည်။ သုံးတန်းသာ ဆိုပေသည့် ဘကောင်းတို့ ထက် အရပ်ပိုရှည်မည့် ဟန်။ ရံဖန်ရံခါ ထမီဝတ်လျက် သူမကိုယ်သူမ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူထင်နေလားမသိ။ တကယ်တော့ အေးအေးမာသည် အသက်အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်နေသည့် အသွင်။ ဆော့ကစားဖို့သာ မက်သော ဘကောင်းအတွက် အေးအေးမာကို ကြည့်လို့ မရ။ ဘယ်နှယ့် ကစားရမယ့် အရွယ် မကစားပဲ ဟန်နဲ့ စတယ်နဲ့ လုပ်နေတယ်။ ထို့ကြောင့် အေးအေးမာကို ဘကောင်းတို့ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် စပ်ဟပ်လို့ မရချေ။
“ငတော်..ငတို့ မင်းကို စောင့်နေရတာ ကြာလှပြီ”
ငတော်ရောက်ရောက်ချင်း လှိုင်ဘွားက မကျေနပ်သည့် လေသံနှင့် ဆီးပြောကာ အေးအေးမာကို မေးငေါ့ပြလျက် ဘာကြောင့် ပါလာရသလဲဟု ငတော်ကို မျက်နှာရိတ် မျက်နှာကဲဖြင့် ကြည့်လိုက်သည်။
ဘကောင်းကတော့ ဗေဒါချောင်းဆီသို့ လှမ်းမျှော်ကြည့်ကာ စွန်လွှတ်နေသူများကို တွေ့လိုတွေ့ငြား ရှာကြည့်နေသည်။
“ဒီနေ့ကြမှ စွန်လွှတ်တဲ့သူတွေကလည်း တစ်ယောက်မှ မရှိကြဘူး..”
ဘကောင်းက ငတော်နှင့် လှိုင်ဘွားကို လှမ်းပြောသလိုလို၊ သူတစ်ယောက်တည်း မကျေမနပ် ရေရွတ်နေသည်။ ဘကောင်းစိတ်ထဲတွင် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး အရာရာ အချိုးအစား မကျဖြစ်နေသည်ဟု ထင်သည်။ ပုရစ်အော်သံတို့ တိတ်ဆိပ်နေလျက်၊ ကောင်းကင်ပြင်သည် စွန်(လေတံခွန်) တို့နှင့် ပြည့်နှက် နေရမည့် အစား မိုးသား တိမ်လိပ်တို့ အုံ့အုံ့ဆိုင်းဆိုင်း ရှိလှသည်။ ချောင်း ဗေဒါတို့အပေါ်ကို နင်းဖြတ်ကာ စွန်လိုက်မည့် မဟာသူရဲကောင်းများလည်း မရှိသဖြင့် ရေဘုတ်ငှတ်တို့ အုပ်အုပ်ကြက်ကြက် မြူးပျော်နေကြသည်။
အေးအေးမာ က ခပ်တည်တည်နှင့် ဘကောင်းတို့ သုံးယောက်လုံးက သူမကို ခရီးဦးကြိုပြုစု ဖျော်ဖြေရမည့် အသွင်။ သို့သော် သူမသည် စာတော်သော ဘကောင်းကိုတော့ အားကိုးတကြီးရှိသည်။ ငတော်၊ လှိုင်ဘွားနှင့် ဘကောင်းတို့ သုံးယောက်ထဲတွင် ဘကောင်းကို ပိုပြီး ခင်တွယ်လိုသည်။ အေးအေးမာသည် ဘကောင်းတက်နေသော ကျူရှင်ကို လိုက်တက်သည်။ ဘကောင်းနှင့် လိုက်လျက် ကျူရှင် အတူတူသွားလိုလှသည်။ သို့သော် ဘကောင်း အပေါ် အလေးပေးသော အေးအေးမာ၏ ခင်တွယ်ဟန်တို့သည် ကစားမက်သော ဘကောင်း၏ အာရုံတံခါးရှေ့မှောက်တွင် အဖိုးမတန် ကျေပျက် လွင့်ပျယ် ပျောက်ဆုံးကုန်ရသည်။
ငတော်ကတော့ အေးအေးမာကို ကြောက်သည်။ အေးအေးမာနှင့် စာလျင် ငတော်၏ ခန္ဓာကိုယ်က နည်းနည်း ညှက်သည်။ ပြီးတော် ငတော်က သူ၏ ဘဝ အခြေအနေအရ အားငယ်တတ်လေ့ရှိသည်။ သူသည် အရာရာကို အရှုံးပေးကာ၊ သူငယ်ချင်းတို့၏ အလိုကို လိုက်လျောလေ့ရှိသည်။
အခုလည်း နောက်ကျနေသည့် ငတော်တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းတွေ ရှေ့တွင် အပြစ်ရှိသူပမာ အသာအယာရပ်လျက် အေးအေးမာကို တချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။
“ငတို့အိမ်မှာ လူတွေများနေလို့ကွ..အမေကို အရက် ကူရောင်းပေးနေတာ..ငါ လာတော့ လမ်းမှာ အေးအေးမာနဲ့ တွေ့တာ..ကျူရှင်သွားဖို့ နီးပြီး မင်းတို့ကိုပါ သွားခေါ်ရအောင် ဆိုလို့ မင်းတို့ကို လာခေါ်တာ”
“ကျူရှင်က စောသေးတယ်ဟ..နင်က ဘာလို့ အစောကြီး သွားချင်ရတာတုံး”
လှိုင်ဘွား၏ မကျေနပ်သံက အေးအေးမာဖက် လှည့်သွားသည်။
“နင်တို့ နာရီလည်း မကြည့်ဘူး..အခု နှစ်ချက် ခွဲနေပြီ..ကျူရှင်က သုံးချက်တီးရင် တက်ရမှာ”
ကြည့်…အဲဒါတွေကြောင့် ဘကောင်း. အေးအေးမာနဲ့ မတည့်တာ။ စောနကမှ နာရီစဉ်က နှစ်ချက် ထိုးသွားတာ။ ဒါကို သူက နှစ်ချက် ခွဲနေပြီတဲ့။ ဒါသက်သက်မဲ့ ကျူရှင်သွားချင်လို့ ပိုပြောတာ။ ဘကောင်း မကျေနပ်တော့။
“နင်ဘာသာ နင် ကျူရှင်သွားပါလား…ဘာလို့ ငတို့ကို လာခေါ်ရတာတုံး”
“နင်တို့ မလိုက်ရင် ငါ ကြီးကြီးနဲ့ တိုင်ပြောမယ်”
ကျူရှင် ဆရာမကြီးကို သူရို့က ကြီးကြီးဟုပဲ ခေါ်ကြသည်။ ကြီးကြီးကိုတော့ ဘကောင်းကြောက်သည်။ ကျူရှင်မလာသေးပဲ ဘုရားစောင်းတန်းထဲတွင် ပုရစ်နှိုက်နေသည်ဟု အေးအေးမာက တိုင်ပြောလိုက်ပါက အရိုက်ခံရမှာ အသေအချာပင်။ အေးအေးမာက သူရို့နှင့် ကျူရှင် အတူတူ သွားလိုသည်။
“လာပါကွာ ကျူရှင် သွားကြရအောင်”
ငတော်က ပြေရာပြေကြောင်း အလိုက်သင့်ဝင်ပြောသည်။
လှိုင်ဘွားကလည်း ဘကောင်းကို ဘာဆက်လုပ်မလဲဟု လှမ်းကြည့်သည်။
ပုရစ်နှိုက်သွားဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်တော့။ ဒီနေ့ ဘကောင်း အေးအေးမာကို လုံးဝ မကျေနပ်။ ကျူရှင်ကိုသွားသာ သွားရမည် စိတ်ကတော့ ကြည်ကြည်လင်လင် မရှိချေ။ ဘကောင်းမျက်နှာ တစ်ခုလုံး စူပုပ်လျက် သူရို့အပေါ် အနိုင်ကျင့်သော အေးအေးမာကို မကျေ မချမ်းရှိနေသည်။
ကြီးကြီး၏ကျူရှင်တွင် အေးအေးမာက ဘကောင်း ထိုင်သည့်ခုံ၏ အရှေ့ခုံတွင် ထိုင်ရသည်။ ဉာဏ်ကောင်းသော ဘကောင်းက ငတော်၊ လှိုင်ဘွားနှင့် အေးအေးမာတို့ထက် အရင် သင်္ချာ ပုစ္ဆာများကို အလျင်အမြန် တွက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပင်လျင် ငတော်နှင့် လှိုင်ဘွားတို့က ဘကောင်း ဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ထိုင်လျက် ဘကောင်းတွက်ပြီးသမျှ အဖြေများကို ကူးယူမှီငြမ်းကြသည်။ ဘကောင်းကတော့ ဉာဏ်ကောင်းသလောက်ပင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်အားကိုးကာ အရာရာကိုပေါ့ပျက်ပျက် လုပ်လေ့ရှိသည်။ ပုစ္ဆာများကို အလျင်အမြန် တွက်လို့ပြီးပါ ကစားဖို့ပင်။ သူ့အတွက် ကစားဖို့က ပထမ။ ကျူရှင်ဆရာမကြီး ခိုင်းသည့် ပုစ္ဆာများကို တွက်လို့ ပြီးလျှင် ငတော်နှင့် လှိုင်ဘွားကို ကစားဖို့ အဖေါ်ညှိရသည်။ အမြဲတမ်းလိုလို ငတော်နှင့် လှိုင်ဘွားက သင်္ချာပုစ္ဆာများဖြင့် နပမ်းလုံးရကာ ဘကောင်းနှင့် မကစားနိုင်။ ပုစ္ဆာများ တွက်လို့ မပြီးပါက ဆရာမကြီး၏ ကြိမ်းလုံးက လက်ဖဝါးပေါ် သုံးချက်စီ အရိုက်ခံရမည့်ဒ ဏ်ကို ကြောက်ကြသည်။
ငတော်နှင့် လှိုင်ဘွားတို့ မကစားနိုင်ဘူးဆိုလျှင်တော့ ဘကောင်းသည် ပုံဆွဲစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြင့် ပုံများ ဆွဲနေလေ့ရှိသည်။ အများအားဖြင့် သူဆွဲသော ပုံများသည် ဓါးများ၊ ခေါင်းပေါင်းပတ်ထားသော လူခေါင်းပုံများ၊ ဓါးကိုင်ထားသည့် သူရဲကောင်းပုံများ ဖြစ်ကြသည်။ ရံဖန်ရံခါ ဒီလုံး၊ ကိုပူစီတို့ ပုံများလည်း ပါသည်။ မတရားမှုကို တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်သော ကာတွန်းဇာတ်ကောင် ဒီလုံး နှင့်ကိုပူစီတို့သည် ဘကောင်း၏ အသည်းစွဲပင်။ ထိုကာတွန်းတို့သည် ကလေးဘဝ၏ စိတ်နေစိတ်ထားကို မျိုးစေ့ချပေးလေ့ရှိသည်။ ထိုမျိုးစေ့တို့သည် အချိန်နှင့် အမျှ မသိမသာ မှီတွယ်ပြီး ကြီးထွားလာသော သဘောရှိကြလေသည်။
အလုပ်တွေကြိုးစားပြီး လုပ်နေတုန်း စာတွေ မရေးနိုင်သေးတာနဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေပဲ တင်ပေးလိုက်တယ်။ နင်လားဟဲ့ လောကဓံဆိုပြီး ဖနောင့်နဲ့ပေါက် အမှုန့်ခြေပစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတုံးပေါ့။